Waa Maxay Sababta Ay Chelsea Ugu Kalsoon Tahay In Ay Liverpool & Man United Bisha January Ku Garaaci Karto Jadon Sancho? - Gool24.Net
Waa Maxay Sababta Ay Chelsea Ugu Kalsoon Tahay In Ay Liverpool & Man United Bisha January Ku Garaaci Karto Jadon Sancho?
December 4, 2019 Mahamoud Batalaale
Kooxaha ugu waa wayn horyaalka Premier league ayaa ku dagaalamaya xidiga kooxda Borussia Dortmund iyo xulka qaranka England ee Jadon Sancho kaas oo si wayn u soo jiitay maamulada kooxaha Premier League.
Manchester United iyo Liverpool ayaa ahaa labada kooxood ee inta ugu badan lala xidhiidhinayay Jadon Sancho laakiin waxaa soo baxday sabab ay Chelsea kalsooni ugu qabto in ay suuqa bisha January kooxahan uga dul qaadi karto da’yarkan Jadon Sancho.
Jadon Sancho ayaa ka soo baxay xarunta da’yarta Manchester City laakiin waxa uu xili ciyaareedkii labaad ku qaadanayaa Borussia Dortmund oo uu si buuxda iskugu muujiyay in uu yahay mid ka mid ah da’yarka aduunka ugu fiican.
Warar soo baxay ayaa sheegaya in ay Chelsea kalsooni ku qabto in ay suuqa bisha January ku garaaci karto kooxaha Liverpool iyo Man United saxiixa Jadon Sancho isla markaana ay doonayaan in ay rekoodhka suuqa ee kooxdooda da’yarkan u jabiyaan.
Sida lagu shaaciyay shabakada Goal, Chelsea ayaa kalsooni ku qabta in saaxiibtinimada ka dhexaysa Jadon Sancho iyo gool dhaliyaasha kooxdeeda ee Tammy Abraham iyo Callum Hudson-Odoi in ay noqon karto sababta dhabta ah ee ay Liverpool iyo Man United da’yarkan ugaga guulaysan karaan.
Waxaa jira xidhiidh fiican oo u dhexeeya Jadon Sancho iyo da’yarka kooxda Chelsea ee kala ah Tammy Abraham iyo Callum Hudson-Odoi kuwaas oo ay kawada tirsan yihiin xulka qaranka England.
Inkasta oo Liverpool tahay kooxda xaalada ugu fiican ku jirta ee uu Jadon Sancho ku dooran karo in ay koobab xili ciyaareedkan u ordayaan, haddana kooxaha Man United iyo Chelsea ayaa dagaalka ku sii jira.
Lama hubo haddii Jadon Sancho uu saaxiibtinimada Tammy Abraham iyo Callum Hudson-Odoi ku xulan karo Chelsea isla markaana ay sabab u noqon karaan in uu iska diido Liverpool iyo Man United.
Jadon Sancho ayaa lagu qiimaynayaa 100 milyan laakiin qiimihii ugu sareeyay ee ay Chelsea ciyaartoy kula soo wareegtay waxa uu ahaa 72 milyan taas oo ay goolhaye Kepa kaga soo iibsadeen kooxda Athletic Bilbao waxayna hadda doonayaan in ay rekoodhkan u jabiyaan Sancho.